ကယ်တင်ခြင်းအထိအတွေ့ | The Saving Touch | Real Conversion
၂၀၁၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ(၄)ရက်၊လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ၊သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
“ယေရူ၏သတင်းတော်ကို ကြားသည်ရှိသော် ၊ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျှင် ချမ်း သာရမည်ဟုဆိုသည်နှင့် ၊လူအစုအဝေးထဲ၌ နောက်တော်သို့လာ၍အဝတ်တော်ကို တို့ လေ၏၊ထိုခဏခြင်းတွင် အသွေးစုဝေးရာ ခန်းခြောက်သည်ဖြစ်၍ ထိုရောဂါနှိပ်စက်ခြင်း နှင့် ကင်းလွတ်ပြီဟု မိမိကိုယ်၌ သိလေ၏ ယေရူသည် မိမိကိုယ်မှ တန်ခိုးထွက်သည် ကို ချက်ခြင်းသိတော်မူလျှင် လူအစုမဝေး၌ နောက်သို့လှည့်၍ ငါ့အဝတ်ကို အဘယ် သူတို့သနည်းဟု မေးတော်မူ၏ တပည့်တော်တို့ကမြင်လျှက်ပင်၊ ငါ့အဘယ်သူတို့ နည်းဟုမေးတော်မူ ပါသည်တကား ဟုလျှောက်ကြသော်လည်း” (မာကု ၅း၂၇-၃၁)။
ဘုရားသခင်သည် ဖျားနာခြင်းဝေဒနာမှ ယနေ့တွင်လည်း ကင်းဝေးစေနိုင်သည်ကို ကျွန်ပ်ယုံကြည် ပါသည်။ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် လူသားများ ဖျားနာခြင်း ဝေဒနာမှ ပျောက်ကင်းရကြသည်ကို ကျွန်ပ်တို့ တွေ့မြင်ရကြပါသည်။ကျန်းမာခြင်းရရှိဖို့ အဓိကအကြောင်းသည် ထိုသွေးသွန်နာစွဲသော အမျိုးသမီး ယေရူရှေ့၌ ပြသပြီးကျန်းမာလာသကဲ့သို့ ကျွန်တို့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာကိုလည်း ကုသနိုင်ပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ အမျိုးမျိုးသော နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းမှ ယေရူနှင့်တွေ့ဆုံသောအခါ တွင်ပြန်လည် ဝိညာဉ် ကျန်းမာလာသည်ကို ကျွန်ပ်တို့ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ကနေ့ညလည်း ဤများပြားစွာသော လူအုပ်ထဲက မိမိတို့၏ ယုံကြည်ခြင်း နှင့်ယေရူ၏ဝတ်ရုံတော်ကို တို့ထိပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းလာဖို့ ကျွန်ပ်ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ သွေးသွန်ခြင်းမှ ကျန်းမာလာသော အမျိုးသမီးထံက များစွာသော သင်ခန်းစာများ သင်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။ ပထမ၊ ထူးခြားအရေးပါသောတို့ထိမှု
များစွာသော လူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ခြံရံလျှက် ထိခိုက်ကြသည်ကို မှတ်ထားပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ရှင်လုကာကျမ်း၌မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ယေရူကလည်း ၊ငါ့ကိုအဘယ်သူတို့သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင် ၊လူအပေါင်းတို့သည် ငြင်းလတ်သော် ပေတရုမှစ၍ သူ၏အပေါင်းအဖော်တို့က သခင်၊ လူအစုအဝေးတို့ သည် ကိုယ်တော်အားတိုက်မိကြသည်ဖြစ်၍ ၊ငါ့ကိုအဘယ်သူတို့သနည်းဟုမေးတော်မူ ပါသည်တကားဟု လျှောက်လေ၏။ (လုကာ ၈း၄၅)။
လူအပေါင်းတို့သည် ယေရှုကို ခြံရံࢽ၍တိုက်မိကြသည်။အမျိုးသမီးတစ်ဦးသာလျှင် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယေရှုကို တို့ထိခြင်းဖြစ်၍ ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်! ယေရှုဘုရားက လူအနည်းငယ်သာ ကယ်တင်ခြင်း ရရှမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သခင်မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ လူအပေါင်းတို့သည် ယေရှုကို ခြံရံࢽ၍တိုက်မိကြသည်။အမျိုးသမီးတစ်ဦးသာလျှင် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယေရှုကို တို့ထိခြင်းဖြစ်၍ ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်! ယေရှုဘုရားက လူအနည်းငယ်သာ ကယ်တင်ခြင်း ရရှမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သခင်မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ကျဉ်းသောတံခါး၀ကို ဝင်ကြလော့။ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းနှင့် တံခါးသည် ကျယ်ဝန်းသည်ဖြစ်၍ ဝင်သောသူတို့သည် များကြ၏အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်သော လမ်းနှင့် တံခါးသည်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍ တွေ့ဝင်သောသူတို့သည် နည်း ကြ၏။ (မဿဲ ၇း၁၃-၁၄)။
ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “တွေ့ဝင်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏” ဟူ၍မိန့်တော်မူပါသည်။ လူအပေါင်းတို့ထဲက ထိုအမျိုးသမီးတဦးတည်းသော ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှါ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါသည်။
တရားဒေသနာတော်ကို ကြားရုံမျှသာပြုကာဖြင့်သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဟု မထင် လိုက်ပါနဲ့။ တနေ့တွင် ကယ်တင်ခြင်းရရှမည်ဟု မသေချာဘဲ ယုံကြည်မနေပါနှင့်။ သင်သည်ပျောက် မြဲပျောက်ဆဲဖြစ်နေမည်ကို တွေးပူမိသည်။ သင်သည်အပြစ်ထဲသို့ သွားမြဲသွားနေပြီး၊ ဘယ်တော့ အခါမှ အပြစ်ရှိကြောင်း မခံစားရဘဲ ၊မျက်ရည်ကျလျှက် အပြစ်မှနောင်တမရ၊ ခရစ်တော်သခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်နေသည်ကို ပင်မသိဘဲ ၊နောက်ဆုံး၌သင်သည် အပြစ်ငရဲထဲသို့ ကျရောက်မည်ကို ကျွန်ပ်စိုးအရိမ်တကြီး စိုးရိမ်နေမိပါသည်။
“ပိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းရာငရဲ” (မာကု ၉း၄၈)၌ ဖော်ပြရေးသားထားပါသည်။
“ထိုညှည်းဆဲခြင်း၏ မီးခိုးသည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက်တက်လျှက်ရှိ၏။သားရဲနှင့်သူ၏ ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍ l၏နာမတံဆိပ်လက်မှက်ကိုခံသောသူတို့သည် နေ့ညည့်မပြတ် သက်သာမရကြဟုလိုက၍်ကြီးသောအသံနှင့်ပြောဆို၏”။ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း၁၄း၁၁)။
ပြင်းထန်နှိပ်စက်သော မီးခိုးမီးလျှံသည် တနေ့ပြီးတနေ့ မြင့်တက်လျှက် နေ့ရက်ကာ လအစဉ်အဆက်ရှိ နေပေသည် အကယ်၍ တဦးတယောက်သည် ထိုငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ကျရောက်ပါက ညှင်းဆဲခြင်း မီးတောက် မီးလျှံသည် မြင့်သထက်မြင့်လျှက် သင့်ကို လောင်ကျွမ်းနေမည် အစဉ်ဖြစ်သည်။ အပြစ်သားများသည် မီးတောက်မီးလျှံ၏ လောင် ကျွမ်းခြင်းကိုဆက်လက်၍ သာခံစားသွားမည်ဟု ဆိုရာတွင ်”သူတို့သည် နေ့ညည့် မပြတ်သက်သာမရကြ” ဟူသောကျမ်းပိုဒ်၌ ဖော်ပြခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။အပြစ်သား များသည် ငရဲမီးအိုင်ထဲ၌ နေ့နေ့ညည ဝေဒနာခံစားရကြမည်ဖြစ်သည်။ တနေ့လုံး ညှင်းဆဲJJJJJခြင်းခံသမျှ ည၌အနားယူချိန်ဟူ၍မရှိပါ၊နံနက်အာရုံ မိုးလင်းသည်မှ ညနေမိုး ချုပ်နားချိန်ဟူ၍ မရှိပေ။ ခရစ်တော်သခင်ကိုမိမိတို့၏အရှင်သခင်အဖြစ်ငြင်းဆန် သောသူ တို့အပေါ် သနားခြင်း ဂရုဏာတော်ဟူ၍ မရှိပါ!
“မိုးမသီ၊ မီးမငြိမ်းရာငရဲ” ဟူ၍ ယေရူဘုရားပြောကြားခဲ့သော နေရာပင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ဆိုလိုရင်းအားလုံးကို အကုန်စင်စစ် နားလည်နိုင်သည်ဟူ၍ တော့ မရှိနိုင်ပါ။ လက်ရှိဤကမ္ဘာပေါ်၌ ကျွန်ပ်တို့ခံစားနေရသော ဖျားနာခြင်းဝေဒနာ များသည် အပြစ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်သသည်။ အပြစ်၏ရလဒ်များမှာရောဂါ ပိုးများဝင်ခြင်း၊ပလိပ်ရောဂါများ လူသားခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဝင်ခြင်း၊ကင်ဆာရောဂါများဖြစ် ပွားခြင်းတို့ကြောင့် တဖြည်းဖြည်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆွေးမြှေးခြင်းစသည်တို့တွေ့ရသည်။ -ဤရောဂါဆိုးများအားလုံးသည် အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ် ထဲ၌အပြစ်ကင်းရှင်းသော လူသားအာဒံမဖြစ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သသည်။ ယုံကြည ခြင်းမရှိသော လူသေများတရားစီရင်ခြင်း နောက်ဆုံးနေ့၌ ထိုကဲ့သို့ညှင်းဆဲခြင်းဝေ သနာကို မီးလျှံမီးတောက်များ နှင့်ငရဲထဲထာ၀ရအစဉ် ခံစားရကြမည်။ ယေရှုဘုရားမိန့် တော်မူသည်မှာ “ပိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းနိုင်သောငရဲ” ထဲထာ၀ရအစဉ်မသေနိုင်ပဲခါးသီးစွာခံ ခံစားရမည်ဟု ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ (John R. Rice, D.D., Hell: What The Bible Says About It, Sword of the Lord Publishers, 1945, page 17).
နောက်မကျသေးခင် ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင် ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။
၂။ ဒုတိယ၊တို့ထိခြင်းခံသော ပုဂ္ဂုလ်ဖြစ်သည်။
ထိုအမျိုးသမီးသည် ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကို တို့ထိလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ကို တို့ထိခြင်းမဟုတ်ပါ။သန်းရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို တို့ထိခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ယေရှုခရစ်တော်ကို သူတို့ထိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သခင်၏ဝတ်ရုံတော်ကို တို့ထိကာဖြင့် သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိမည် ဟူ၍ ကျွန်ပ်ပြောပါမည်။ တို့ထိခြင်းကာမျှဖြင့် သင်သည်ကယ်တင်ခြင်း ရရှိပါမည်။ သင်သည်အပြစ်
ကျူးလွန်စေကာမူ၊ ယေရှုကိုတို့ထိခြင်းဖြင့် သင့်အားကယ်တင်မည်ဖြစပါသည်။ ယေရှုသည် ဒုတိယပုဂ္ဂုလ်၊ဘုရားလူပင်-ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှ ကျွန်ပ်တို့နှင့်အတူ ရှိဖို့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကားတိုင်ပေါ် အပြစ်၏အခကို ပေးဆပ်ဖို့ရန် ဂေသရှေမန် ဥယာဉ်ထဲ၌ အပြစ်အခအတွက် ချွေးမှသွေးကျသည်အထိ ခံစားသောပုဂ္ဂုလ် ယေရှုပင်ဖြစ်သည်။ ကားတိုင်ပေါ် သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြော သန့်ရှင်းစေရန် နှင့်သေခြင်းအပြစ်မှ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးသောသူဖြစ်သည်။
“လောကီသားတို့အား အပြစ်စီရင်ခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည်သားတော်ကို ဤ လာကသို့စေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ် လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း သို့ ရောက်မည်အကြောင်း စေလွှတ်တော်မူ၏။ (ယော၃း၁၇)။
ကျွန်ပ်အပြစ်များကို ဆေးကြောပြီး ရွေးနုတ်ကယ်တင်
အံ့ဩဖွယ် အရှင်၏ မေတ္တာကျေးဇူး!
(၁၉၂၁-၂၀၀၆ခုနှစ် ဂျွန်ဒဗလျူ ပီတာဆန်သီကုံးသော “နမိတ်လက္ခာအရှင်”)
၃။ တတိယ၊ လမ်းခရီးဖြစ်သော သူကိုတို့ထိခြင်း
ယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကို ခန္တာကိုယ် အားဖြင့်တို့ထိ၍ မရနိုင်တော့ပါ၊ အကြောင်းမှာသူ သည်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူပြီး အဖခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ စံပယ်တော်မူပြီးဖြစ်ပါ သည်။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်တို့ထိ၍ ရပါသည်။ ယေရှုသည် သင်၏အပြစ်မှ ဆေးကြော သန့်စင်ပြီး ဖျားနာခြင်းမှလည်း ကင်းဝေးစေမည်ဖြစ်သည်။ “တို့ထိခြင်းသည်” ဝိညာဉ်ရေးရာကို ဆိုလိုပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည်ယေရှုကို တို့ထိပါက သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပေ မည်။ သွေးသွန်နာမှ ကင်းဝေးပြီးနောက် ၊ယေရှုကထိုအမျိုးသမီးအား ပြောကြားခဲ့သည်မှာ-
“ငါ့သမီး၊ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်အနာကို ငြိမ်းစေပြီ။ ငြိမ်ဝပ်စွာသွားလော့။ ရောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်စေဟု မိန့်တော်မူ၏။ (မာကု၅း၃၄)။
“တို့ထိခြင်း” ဆိုရာတွင် ယေရှုသခင်ကို ကြည့်ရှုခြင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် ယေရှုကို မကြည့်ဘဲ၊ တို့ထိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ အမှန်စင်စစ်၊ ထိုအမျိုးသမီးသည် ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်း မရှိဘဲ၊ တို့ထိမည်မဟုတ်ပေ။ ယေရှုကို ကိုးစားခြင်း ရှိခဲ့သည်ကို သူဟောပြောသော စကားအားဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။
“ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျှင် ချမ်းသာရမည်ဟု ဆိုသည်နှင့် ၊လူအစုအဝေး ထဲ၌ နောက်တော်သို့လာ၍ အဝတ်တော်ကို တို့လေ၏ (မာကု၅း၂၈)။
ယေရှုဘုရားကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသည် ယေရှုထံသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ယေရှုထံသို့ လာရောက်ခြင်း မရှိပဲ၊ ယေရှုကို တို့ထိ၍ရမည်မဟုတ်ပါ!
“ယေရှု၏ သိတင်းတော်ကိုကြားသည်ရှိသော်”ဟူ၍ (မာကု၅း၂၇)
၌မိန့်တော်မူသည်။ ယေရှုကို တို့ထိဖို့ရန် သူသည်ယေရှုထံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေသင်လည်း ကနေ့ညယေရှု ကိုတို့ထိမှာလား? မိတ်ဆွေသင်သည်ကနေ့ည ယေရှုကိုကြည့်မျော်မှာလား? မိတ်ဆွေသင်သည် ကနေ့ည ယေရှုသခင်ကိုယုံကြည်ကိုယ်စားမှာလား? မိတ်ဆွေသင်သည်ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်း ကပ်မှာလား?
ယေရှုဘုရား ကျွန်ပ်ကိုရွေးနုတ် ကယ်တင်ခဲ့သော နေ့ထူးကို အမှတ်ရနေဆဲပါ။ချက် ချင်းဆိုသလိုပဲ ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့် တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပြီးယေရှုကို တို့ထိခဲ့သည်။ ယေရှုဘုရားကိုမျော်ကြည့်ခဲ့သည်။ တို့ထိခြင်းခဏတာ၌ ပြောင်းလဲမှုအသစ်ဖြစ်လာခဲ့၏။ ကျွန်ပ်တို့ အတွက် ယေရှုသည် အစဉ်ရှိနေပေသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ပ်သည် ယေရှုကိုမျော်ကြည့်ပြီး ကိုးစားယုံကြည်ခြင်းနှင့် တို့ထိခဲ့သည်။ ထိုခဏခြင်းတွင် အံ့ဖွယ်ပြောင်းလဲမှု အသစ်တို့ ကျွန်ပ်ခံ စားလာခဲသည်! “နမိတ်လက္ခာအရှင်သခင်” ဓမ္မသီချင်းသီဆိုသည်။
ယေရှုကို ထိုအမျိုးသမီး တို့ထိသောအခါ၊ ယေရှုက၊
“ယေရှုကလည်း ၊တစုံတစ်ယောက်သူသည် ငါ့ကိုတို့လေပြီ။ ငါ့ကိုယ်မှ တန်ခိုးထွက် သည်ကို ငါသိ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏(လုကာ ၈း၄၆)။
ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ကို မှ ဘာသာပြန်ဆို ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကား ဒ ကိုဂရိဘာသာစကားမှ ရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပာယ်မှာ (စွမ်း အားတန်ခိုး) နှင့် ဒဒ ခွန်အားဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက ဘုန်းတန် ခိုးနှင့် ခွန်အားကိုယေရှုထံတော်ပါးမှ ထွက်၍ထိုအမျိုးသမီးနှင့်ပေါင်းစည်းကာမကြာမီယေရှု၏ ဝတ်ရုံတော်ကို တို့ထိနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၊ထိုအမျိုးသမီး၏လက်ညှိုးဖြင့် ခရစ်တော်၏ဝတ်ရုံကိုတို့ထိလိုက်ခြင်းဖြင့် ထိုအမျိုးအမီး
နှင့်ခရစ်တော်တို့နှစ်ယောက်သားကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖြစ်စေပြးDဘု ရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ အသုံးဝင်သောအရည်အသွေး တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်ကို သင်မြင်နိုင်ပါမည်လား? လူတို့၏လျှပ်စစ် ဓါတ်လိုက်သလိုမျိုးတို့ ထိခံစားခြင်းမျိုးတော့ဟုတ်မည်မထင်၊ ယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့် တို့ထိလိုက်ခြင်းကသာ အပြစ်သားနှင့်ခရစ်တော်ကြား ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကျန်းမာခြင်းခွင့်နှင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အသုံးဝင်သောအရည်အသွေးကို ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရလာပါသည်။ (C. H. Spurgeon, “The Touch,”' The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1973 reprint, vol. 28, p. 45).
သင့်အသက်တာတစ်ခုလုံးကို ခရစ်တော်လက်တော်၌ ဆက်ကပ်အပ်နှံလိုက်ပါ၊ သခင်သည်သင့်အား အပြစ်ငရဲမှ ကယ်တင်ပါလိမ့်မည်။ လုသာပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊”ငါ့ကို ငါကယ်တင်နိုင်ဖို့ အလို့ငှါ လုပ်နိုင် စွမ်းဘာတခုမှငါ၌မရှိ” ဟူ၍ပြောကြားခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်တော်တစ်ပါးတည်း ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်၍ ကျွန်ပ်၏အသက်တာဝိညာဉ်ကို ကိုယ်တော်လက်သို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထားပါသည်” ဟူ၍ လုသာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သင်သည် ယေရှုဘုရားထံ ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနှင့်မှီခိုကိုးစားပါက ထိုခဏခြင်း တွင်သင်သည် အသက်တာ တစ်ခုလုံး အတွက်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါလိမ့်မည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ခရိတန်အာယ်ချန်မှ ရှင်မာကု ၅း၂၄-၃၄ အထိကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ် ဂရိတ်ဖက်စ်မှ (၁၉၂၁-၂၀၀၆ခုနှစ် ဂျွန်ဒဗလျူ ပီတာဆန် သီကုံးရေးသားသော “နမိတ်လက္ခာအရှင်သခင်” ) ဓမ္မသီချင်းကို ကျူးဧပေးပါသည်။
၁။ ပထမ၊ ထူးခြားအရေးပါသောတို့ထိမှု။
လုကာ ၈း၄၅၊ မဿဲ ၇း၁၃-၁၄၊ မာကု ၉း၄၈၊ ဗျာဒိတ် ၁၄း၁၁၊
၃။ တတိယ၊ လမ်းခရီးဖြစ်သောသူကို တို့ထိခြင်း။
မာကု ၅း၃၄၊ ၅း၂၈၊ ၅း၂၇၊ လုကာ ၈း၄၆၊